Global Voices teny Malagasy » Rosia – Etazonia .: Nandresy i Obama, Nandray Fitenenana i Medvedev · Global Voices teny Malagasy » Print
Rosia – Etazonia .: Nandresy i Obama, Nandray Fitenenana i Medvedev
Voadika ny 16 Jona 2018 17:05 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika (fr) i Suzanne Lehn, nirinandrea
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Rosia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Ora vitsy taorian'ny fandresen'i Obama tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena Amerikana, nanao ny lahateniny voalohany  (amin'ny teny Anglisy) ny filoha Rosiana, Dmitry Medvedev, teo anoloan'ny Filankevitry ny Federasiona Rosiana . Nahasarika ny sain'ny firenena sy ny an'ny Tandrefana ny fanambaràny.
Naneho ny heviny  (amin'ny teny rosiana) ilay mpampiasa LiveJournal oleg-kozyrev tamin'ny tolokevitr'i Medvedev hanitatra ny fe-potoam-piasan'ny filoha ao Rosia ho tonga efatra ka hatramin'ny enina taona :
Nahita vahaolana aho. Manohana ny tolokevitr'i Medvedev hitondra mandritra ny enina taona aho. Saingy tokony hiova ihany koa ny lalàna momba ny faharetan'ny taona. Tsy maintsy maharitra 243 andro ny taona iray.
Tao anaty kabariny, tsy niarahaba an'i Obama noho ny fandreseny i Medvedev, na nanonona ny anaran'ilay filoha voafidy akory aza. Fanampin'izay, nandefa hafatra manebaka ihany koa izy, nampanantena, ankoatry ny zavatra hafa, ny hanaparitaka ny rafitra momba ny balafomanga tsy mahataka-davitra “Iskander”  (amin'ny teny Anglisy) ao amin'ny faritr'i Kaliningrad , any amin'ny sisintany andrefan'i Rosia, mba « hanoherana amin'ny fomba mahomby ireo andrana maharitra sy betsaka ataon'ny governemanta Amerikana amin'izao fotoana izao mba hametrahana singa vaovao amin'ny rafitra fiarovantena amin'ny balafomanga ao Eoropa.»
Ireto manaraka ireto no nosoratan'ireo blaogera Rosiana ho fanehoankevitra tamin'ny ampahan'ny lahatenin'i Medvedev izay natao ho an'ny mpihaino iraisam-pirenena sy tao an-toerana.
Ilay mpampiasa LiveJournal viking-nord  (amin'ny teny rosiana) :
Lazao ary hoe nahoana i Medvedev no tsy maintsy niandry ny valim-pifidianana tao Etazonia vao nanao iny kabary ho an'ny Douma Federaly iny ??? Tsy nisy dingana na dia iray aza natao hanatsarana ny fifandraisana amin'i Etazonia.
Nantenaiko fa hilaza izy hoe hanokatra pejy vaovao amin'ny fifandraisana amin'ireo mpitantana vaovao ao Amerika. Ohatra, hanomboka handinika fifampiraharahana momba ny rafitra fiarovana amin'ny balafomanga any Eoropa Atsinanana isika. Saingy tsy misy na inona na inona toy izany nolazainy tao. Mifanohitra amin'izany, toy izao ny voalaza tao – manaparitaka ianareo, tsy raharahanay, ary ho setrin'izany, hametraka Iskander ao Kaliningrad izahay ary hamela sampana balafomanga hiparitaka ao Kozelsk. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hanomboka hazakazaka fanamboarana fitaovam-piadiana anaty krizy ara-toekarena izahay!!! Tsy ratsy an, sa ahoana ???
Ho fehiny, heveriko fa na i Obama aza mety tsy nanampo ny zavatra tahaka izao…ary mety nisy fanantenana ihany ny tsy hanohizany ny rafitra ara-balafomanga, satria vatomamy lafovidy izany, ary ireo demokraty, ara-potokevitra, dia manana fisainana mifantoka amin'ny zavamisy.
Fanehoankevitra vitsivitsy mikasika ity lahatsoratra ity :
Aza vendrana, tsy hisy zavatra hiova izany eo amin'ny fifandraisan'i Rosia sy Amerika raha ato ho ato. Tsy midika inona ny fiovàna mpitondra avy amin'ny lafy iray. Ankoatra izay, ny fihetsika haseho an'i Rosia angamba no teboka tokana iombonan'i Obama sy McCain hevitra nandritra ireo adihevitra
Mila fahavalo izy ireo. Izay no anton'ireo fihantsiana sy di-doha ataony. Tsy vitan'izy ireo ny hitoetra tsy hanana fahavalo, sa tsy izany ??? :(((
Ilaina ny sarintsarim-pahavalo avy any ivelany ahafahana mamoritra ny fahalalahana ao an-toerana.
telemont  (amin'ny teny Rosiana) :
[…] Raha tsy nisy [ny kabarin'i Medvedev tamin'ny 5 Novambra], dia nanadihady ny fifidianana amerikana avokoa ny mpandalina hevitra rehetra , ka dia tsy maintsy nampitahain'ny olona ny zava-misy Rosiana sy Amerikana. Tamin'ny fiakarany teo ambony lampihazo ary tamin'ny nandefasany karazana naoty kely maro efa nomanina mialoha, navilin’i Medvedev ny fijerin'ny vahoaka tsy ho any amin'ny lohahevitra mampidi-doza ho an'ny fitondrana.
Toy izany mihitsy ny fomba nampisaina tamin'ilay [ loza mahatsiravina tao Beslan ] : rehefa hita fa nanomboka nametraka fanontaniana mahamay sy mahasorena tamin'ny fitondrana ny vahoaka, nanapa-kevitra ny hanafoana ny fifidianana ireo governoram-paritra i Poutine. Raha tsorina, ny fandraisana andraikitra iray [ankoatra ilay fanontaniana], saingy tena nety tanteraka: nirohotra avy hatrany hifanakalo hevitra ny olona, nifidy ary nanendry, nanadino hoe nisy ireo ankizy maty
Tao aminà lahatsoratra iray hafa, telemont no nanamarika  (amin'ny teny Rosiana) fa:
[…] Inona no hitadiavana izay dikan'ny zavatra lazain'ny olona tsy mandray andraikitra amin'ny nataony, eny fa na ny teny naloaky ny vavany aza.
( Hita ato ny t songanà rohy maromaro mankany amin'ireo fanehoankevitra avy amin'ireo blaogera miteny anglisy momba ny kabarin'i Medvedev )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/16/120441/
 lahateniny voalohany: http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2008/11/05/2144_type70029type82917type127286_208836.shtml
 Filankevitry ny Federasiona Rosiana: http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
 Naneho ny heviny: http://oleg-kozyrev.livejournal.com/1599756.html
 rafitra momba ny balafomanga tsy mahataka-davitra “Iskander”: http://en.wikipedia.org/wiki/Iskander
 faritr'i Kaliningrad: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaliningradskaja_oblast%27
 loza mahatsiravina tao Beslan: http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_de_Beslan
 nanamarika : http://telemont.livejournal.com/18268.html
 ato ny t: https://globalvoicesonline.org/2008/11/06/russia-us-reactions-to-medvedevs-address/